ज्योती मगरका चर्चित १२ विवादीत घटनाहरु
छोटो–छोटो सारी मेरो हातमा सुनको बाला कुरा काट्ने मारिरहन्छन् मेरो आफ्नै चाला’ तीज गीत ढाडे बिरालोमा अभिनय गरेपश्चात् सिर्जित विवादलाई प्रतिउत्तर दिन गायिका ज्योति मगरले यो तीज गीत गाइन् । उक्त गीतले पनि दर्शक–श्रोताको उल्लेख्य माया पायो । कि रेखाको चल्छ, कि देखाको चल्छ’ ढाडे बिरालोको म्युजिक भिडियोभित्रै ज्योतिले बोलेको एउटा संवाद थियो । जुन फेमस डायलग बन्यो । युट्युबमा १९ लाखपटक हेरिएको उक्त म्युजिक…विस्तृत समाचार »
१५, मंसिर काठमाडौँ । हिन्दी टेलिसिरियल कुमकुम भाग्य भारतमा मात्र नभई नेपालमापनि उत्तिकै लोकप्रिय छ । भारतीय टिभी च्यानल जी टिभीबाट सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म राती नेपाली समय ९ बजेबाट प्रशारण हुँदैआएको ‘कुमकुम भाग्य’मा औधी मन पराइएका पात्र हुन् प्रज्ञा । ‘कुमकुम भाग्य’ सिरियलकी मुख्य पात्र प्रज्ञाको वास्तविक नाम श्रीती झा हुन् । नेपाल तथा भारतका टेलिभिजन दर्शकहरुको धडकन बन्न सफल भएकी श्रीती सप्तरीकै छोरी हुन् भन्ने…विस्तृत समाचार »
अविवाहित दीपाका छोरा को ?
काठमाडौँ । उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने कलाकार निर्मल शर्मा भन्दा अर्की हाँस्य कलाकार दीपाश्री निरौला पक्कै कान्छी होलिन् । यिनै निर्मल दीपाको छोरा भन्दा पत्यार लाग्ला त ? निर्मलले फिल्म निर्माणमा असफलता भोग्दै गर्दा दीपाले हाँस्य क्षेत्रमा स्थान जमाउँदै थिइन् । अहिले निर्मल निर्देशनमा सफलताको स्वाद चाख्ने तयारीमा छन् । फिल्म ‘चकलेट’को प्रमोशन कार्यक्रममा दीपाले निर्मललाई छोराको संज्ञा दिइन् । जतिबेला दीपालाई निर्मलले आफ्नो…विस्तृत समाचार »
झोलाले माग्यो पाँच करोड क्षतिपुर्ती
१५, मंसिर काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र ‘झोला’ अनाधिकृत रुपमा युट्युवमा हालिएपछि निर्माण पक्षले माउण्टेन रिभर फिल्मस् प्रालीका विरुद्धमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता गराएको छ । माउण्टेन रिभर फिल्मस् प्रालीका प्रमुख रहेका चन्द्रकान्त झाको नाममा महानगरिय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा किटानी जाहेरी दर्ता गराएको हो । उक्त कम्पनीलाई विदेश प्रदर्शन तथा प्रचारको लागी दिइएको फाइल नै युट्युवमा आएपछि उसको अनाधिकृत काम विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराउनु परेको…विस्तृत समाचार »
“रुदै रुन्न भनेनि आँशु झरिहाल्छ”
९, मंसिर काठमाडौँ । केहर सिंह प्यासी र देवी घर्तीको स्वरमा “रुदै रुन्न भनेनि आँशु झरिहाल्छ” नामक गीत सार्वजनिक भएको छ । केहर सिंह प्यासीको शव्द रहेको गीतमा महेन्द्र भण्डारीको लय छ । एकिन्द्र सारा शंकरले निर्देशन गरेको उक्त गीतमा मायाँबाट छुडिदाको पीडालाई सम्बोधन गरिएको छ । गीतमा केहर सिंह प्यासी , अनिता बस्नेत र रमेशबाबको अभिनय रहेको छ । भिडियो विस्तृत समाचार »
बाग्मती पुस २४ देखि प्रदर्शन हुने
७, मंसिर काठमाडौँ । मनोरञ्जनात्मक नेपाली चलचित्र बाग्मती आगामी पुस २४ गतेदेखि देशभर प्रदर्शन हुने भएको छ । सन्नी केरलाद्वारा निर्देशित तथा दिनेश दर्शनधारी र विजय सत्यालको प्रस्तुति रहेको साउथ इन्डियन प्रविधिमा निर्मित ‘बाग्मती समाजमा घटेका घटनालाई मनोरञ्जनात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । समाजमा रहेका मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको पारिवारिक जीवनशैली र भोगाइलाई चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । मैलिएको बाग्मतीलाई…विस्तृत समाचार »
प्रधानमन्त्री बनिन् गौरी मल्ल
काठमाडौ । अभिनेत्री गौरी मल्ल महिला प्रधानमन्त्रीको भुमिकामा रहेको टेलिभिजन शृंखला सिंहदरबार आइतबारदेखि प्रशारण हुने भएको छ । सर्च फर कमन ग्राउन्डद्वारा निर्मित टेलिशृंखला आइतबार देखि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने भएको हो । छिरिङ रितार शेर्पाले निर्देशन गरेको यस श्रृखलामा १३ भाग रहेको छ सिंहदरबार रहेका आइतबार प्रसारण हुने बताएको छ । श्रृखलामा पहिलो महिला प्रधामन्त्रीको रुपमा…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 100 101 102 103 104 Older Last ›